O nwere ike ịbụ na ị chọpụtala na m gbachiri nkịtị n’izu gara aga. Ọ bụghị site na enweghị ọrụ, enweela m nke ọma izu ike ọrụ!
Anyị na-aga ịnwale ya na blọọgụ m! Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwa mgbakwunye na ọrụ ahụ, ịnwere ike ijikọ Adam na weebụsaịtị ha. Jide n'aka na ị kwuru banyere blọgụ m, anyị na-arụ ọrụ na iwepụta ego maka ndị na - agụ akwụkwọ m. Ọ ga-amasị anyị ịgbakwunye ndị na-ede blọgụ ole na ole (ọrụ ejedebeghị na US maka ugbu a) nke ga-enye ọrụ ahụ mgbatị ahụ.
IHE: Anyị anaghị akwụ ụgwọ maka ebubo na onye na-ebu gị nwere ike ịgba gị ụgwọ maka ozi ederede ma ọ bụ ụgwọ data metụtara ha! Nke a bụ beta kpamkpam ugbu a (ọ ga-abụrịrị na ị debanyere aha ya mgbe ọ na-adọta maka ihe niile SPAM kwuru!).
Tags: wordpress smswordpress sms mwekotawordpress sms ngwa mgbakwunye